Thursday, 23 May 2019 16:21
"ညဥ့်နက်ချိန်ထိ ဖုန်းသုံးတတ်တဲ့သူတွေ သိထားသင့်တဲ့ ဆိုးကျိုးများ"
အခုနောက်ပိုင်း လူငယ်တွေတော်တော်များများ ညဥ့်နက်ချိန်အထိ ဖုန်းသုံးတဲ့ အလေ့အကျင့်ဆိုးကြီးကို မကျော်လွှားနိုင်ကြပါဘူး။
Thursday, 23 May 2019 14:56
"လူတစ်ယောက်ကို စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ ဆိုးကျိုးပေးနိုင်သော အမူအကျင့် (၇) မျိုး"
Thursday, 23 May 2019 10:35
"လူတိုင်း မေ့လျော့ထားကြတဲ့ အဖိုးတန်ပစ္စည်း ၉ မျိုး"
ငွေဟာ အတော်များများကို ဖြစ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ စွမ်းအားရှိပါတယ်။
Wednesday, 22 May 2019 17:12
"ကိုယ်နဲ့မရင်းနှီးသေးတဲ့သူတွေနဲ့ စကားကောင်းကောင်းပြောနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်း (၅) ခု"
တစ်ချို့သူတွေက လူအများကြီးရှေ့မှာ စကားပြောရမှာကြောက်သလို ကိုယ်မသိတဲ့၊ မရင်းနှီးသေးတဲ့တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောရမှာကြောက်တတ်ကြပါတယ်။
Wednesday, 22 May 2019 16:23
ယနေ့ အချိန်ထိ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့ အကြီးမားဆုံး လျှို့ ဝှက်ချက် (၁၀) ခု
သင်ဟာ အကြောင်း အရာတစ်ခုခုကို တခြား သူတွေကိုမသိစေချင်လို့ ဖုံးကွယ်ထားတယ်။ အဲ့ဒီဖုံး ကွယ်ထားတဲ့အရာတွေကိုက ပဲ တခြားလူတွေအပေါ် အာရုံစူးစိုက်မှုပိုရှိလေပါပဲ။
Wednesday, 22 May 2019 09:55
"ဥာဏ်ရည်မြင့်မားသော မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာ (၅) ခု"
တချို့ မိန်းကလေးတွေက မာန ကြီးတယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့ သူတို့က သူတို့ မှာ အားအင်တွေရှိနေတယ်၊ ယောကျာင်္းလေးတွေနဲ့ တန်းတူပဲ ဆိုတဲ့ စိတ် သူတို့ မှာရှိနေတာရယ်၊ အရှက်အကြောက်လည်းကြီးတာရယ်ကြောင့်ပါ။
Tuesday, 21 May 2019 17:40
Good Morning ဆိုတဲ့စကားနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ကိုယ့်ရဲ့ မနက်ခင်းလေးမှာ ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ ?
မနက်ခင်း စိတ်ဖိစီးမှုမရှိပဲ လန်းဆန်းနေမယ်ဆိုရင် တနေ့တာလုပ်ဆောင်သမျှအရာ အားလုံးကိုအဆင်ပြေ ချော့မွေ့စေမှာပါ။
Tuesday, 21 May 2019 17:04
"အပျင်းကြီးသူများ ဟာ ဥာဏ်ပိုကောင်းကြောင်း ပြသနေတဲ့ အချက် (၆) ချက်"
ပျင်းတယ်ဆိုတာဟာ နာမည်ဆိုးပေမယ့် တကယ်တော့ လူသက်သာပါတယ်လို့ လူတိုင်းပြောကြပါတယ်။
Tuesday, 21 May 2019 13:54
ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ ရန်သူ (သို့ မဟုတ်) overthinking ကို ဘယ်လိုနှိမ်နှင်းကြမလဲ
အတွေးလွန်ခြင်းဟာ ကောင်းကျိုး မပေးတတ်ပါဘူး။ တွေး သင့်သလောက် တွေးတာပဲ ကောင်းပြီး
Tuesday, 21 May 2019 10:20
"အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတိုင်း ရှောင်ကျဉ်ရမည့် အချက် (၇) ချက်"
၁. ဝေါဟာရကို စကားအဆက်အစပ်မပါဘဲ အလွတ်မကျက်ပါနဲ့။
Daw Aye Thwin